Zippers Phone iyo TabletPlus 10 oo leh Intel Atom CPU mahadsanid Vexia | Androidsis
Manuel Ramirez | | Mobiles, Kiniiniyada Android
Shalay waxaan kaqeyb galnay shirkii jaraa'id ee ay bixisay Vexia si loogu soo bandhigo dhowr badeecadeeda oo laxiriira GPS navigation iyo Android, laba kamid ah waxaan kuu soo qaadaneynaa inaad dhadhamiso terminals-ka Android. oo ay abuurtay shirkad Isbaanish ah oo leh ujeedooyin aad u xiiso badan oo lagu jahwareerinayo dadka maxalliga ah iyo shisheeyaha, suuqa aadka u tartamaya ee Android.
Zippers Phone iyo TabletPlus 10 waa laba aaladood oo dadka ka dhigi doonta inay hadlaan sababo la xiriira qiimaha tartankooda iyo lahaanshaha calooshooda processor Intel Atom ah. Mid gaar ah oo kuu oggolaan doonta inaad gacanta ku haysato kiniin iyo taleefan casri ah oo qaab casri ah wata iyo dhammaan awoodda lagama maarmaanka u ah socodsiinta Android.
Xaqiiqdu waxay tahay in laba qalab oo Android ah sida Zippers Phone iyo TabletPlus 10 in waxaa ku jira Intel Atom CPU Waxay si xoog leh u soo jiidanaysaa dareenka, Samsung waxay si xoog leh u sharraxday Galaxy Tab 3 10.1, Intelna si tartiib tartiib ah ayuu u galayaa adduunka Android. A Faa'iidada weyn ee Vexia waxay leeyihiin qalab muhiim u ah qalabkooda, taasna waxay hubaal u horseedi doontaa inay ku guuleystaan ​​iib wanaagsan.
1 Jiinyeer Telefoon
Waxaan ku bilaabaynaa Taleefanka loo yaqaan 'Zippers Phone', oo qaab naqshad leh leh iyo dhammaystir dhammaystiran, oo ku yimaadda laba ikhtiyaar, midab cad iyo kaarboon madow 4,3 inji IPS LCD shaashad ah iyo qaraar dhan 960 × 540 (QHD). Waxay leedahay processor-ka 1.2Ghz Intel Atom, Dual SIM, kamarad gadaal 5MP ah iyo kamarad hore oo ah 0.3MP.
Waxay leedahay 1GB oo RAM ah iyo 8GB kaydinta gudaha ah oo la ballaarin karo iyada oo ay ugu wacan tahay microSD (illaa 32GB). Awoodda batteriga waa 2000mAh oo ay weheliso Waxqabadka Intel Atom CPU, waxay heli doontaa maalinta isticmaalka si fiican. Nooca Android ee aad heli doonto wuxuu noqonayaa 4.0 ICS.
Faa'iidooyinka mid ka mid ah haysashada Taleefoonka loo yaqaan 'Zippers Phone' waa lakabkaaga "Zippers" shakhsi ahaaneed, Zip interface ku saleysan oo bixisa helitaan dareen leh howlaha iyo barnaamijyada ugu muhiimsan ee taleefanka. Shaabad aqoonsiga oo Vexia ay rabto inay calaamadeyso markii ugu horeysay ee aan isticmaalno Telefoonkaaga 'Zippers Phone'. In kasta oo ay sidoo kale bixiso suurtagalnimada u adeegsiga Android saldhig ahaan haddii aanan doonaynin inaan adeegsanno jiinyeerrada.
Wixii aan shalay ka hubinaynay goobta, waa terminal leh culeyskiisa fudud (135 g.) Iyo qaabkeeda xarrago leh ayaa iskeed u taagan marka aad gacanta ku haysato, oo leh shaashad tayo aad u wanaagsan leh iyo qaraar ku filan waxa terminal-ka Android uu dalbado maanta, iyo is-dhexgal si dhakhso leh uga jawaaba tallaabo kasta oo aannu qaadi doonno.
TabletPlus 10 waa kiniiniga ugu horreeya ee Android oo leh processor Intel suuqa Yurub. Horeyba waa layaab markii ay bilaabatay in loo isticmaalo culeyska fudud iyo qaabka khafiifka ah ee aluminiumka iyo dhalada awgood. Shaashadeeda 10.1-inch ah oo taabasho badan taabasho ah, oo leh qaab dusha sare ah iyo xallinta 1280 × 800 pixels, IPS panel iyo SGX540 processor-ka waxqabadka sare leh, kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku hesho natiijooyinka ugu wanaagsan ee shabakadda dhirta iyo ciyaaraha 3D.
Gudaheeda ayay markale ka muuqataa processor-ku 1.6Ghz Intel Atom Iyada oo hal xuddun ah, wax-ku-oolinta laga helo hal xudun ayaa awood u leh inay bixiso waxqabad sare marka loo eego kuwa kale ee leh laba-geesood, iyo inay ka ahaato shirkadda intaas ka sii badan. Xusuusta RAM ee ay leedahay 1GB iyo 32GB oo ah keyd gudaha ah oo dhameystiran TabletPlus 10.
Awoodda baytariga ayaa ka badan intaad filan karto leh 5400 Mah si wada jir ah ula isku darka processor-ka hal-geesoodka ah ee Intel iyo Android 4.0 wuxuu ku darayaa madax-bannaanid aan caadi ahayn oo kordhin doonta nolosha kiniinkeenna dhowr maalmood iyada oo aan xitaa la ogaan.
Qalabka qaar ayaa si xoog leh ay Vexia ugu soo bandhigtay Warshaddii Royal Tapestry ee Madrid
Labada midkoodba, tayada ayaa taagan meel kasta, wayna adagtahay in cilad la helo, maaddaama lagu soo saaray iyadoo diiradda la saarayo adeegsadaha iyo awoodo dhaqaajin doona wax kasta oo hortooda la dhigayo. Ciddiyaha dareenno aad u wanaagsan lagu siiyay shalay shirkii jaraa'id iyo inaad adigu iska arki karto sawirrada la bixiyay.
Una soo jeedin aad u fiican ayaa la bilaabay by Vexia oo leh Zippers Phone iyo TabletPlus 10 oo si toos ah u galaya si ay ula tartamaan shirkadaha waawayn processor Intel iyo lakab u gaar ah oo u gaar ah, oo ay weheliso naqshad qurux badan labadeeda aaladood. Laga bilaabo halkan waxaan u rajeyneynaa Vexia nasiib wacan, iyo u sacbinta doorashadan weyn ee boosteejooyinka inay ku soo galaan suuqa Android hab muhiim ah.
Waqtigaan la joogo waxaa la ganacsan doonaa Taleefannada jiinyeerka ayaa qiimahoodu yahay € 199 iyo TabletPlus 10 oo ah € 299, ayaa ka soo muuqan doona xilligan El Corte Inglés iyo dukaamada kale ee waaweyn.
Macluumaad dheeraad ah - Intel wuxuu xaqiijinayaa, processor Atom Z2560 wuxuu kujiraa Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vexia waxay soo bandhigeysaa Zippers Phone iyo TabletPlus 10, oo ah sumad Isbaanish ah oo leh Intel Atom chip oo caloosha ku jirta
Waxaan leeyahay aad suu kk aad uma cusbooneysiin karo ma rujin karo kalabar codsiyada ku jira dukaan-ciyareedku isma waafaqsana, qofna kuma talin karo gabi ahaanba. haddii qof doonayo tayda, hadiyaddu waa iska caadi
Ku jawaab fanaaniinta